Aldous Huxley: Mabhuku | Current Literature
Aldous Huxley: mabhuku
Mufananidzo kunobva Aldous Huxley: Picryl
Isu tinongofunga nezveAldous Huxley kuti kune bhuku rimwe chete, iro re 'Nyika Itsva Yakashinga', zvisinei, chokwadi ndechekuti munyori akanyora mamwe akawanda mamwe mabasa. Asi, kana tikakukumbirai Aldous Huxley nemabhuku ake, Ungatiudze zvimwe usina kutarisa paInternet? Sezvingabvira, vashomanene zvikuru vaigona kupindura mubvunzo iwoyo.
Nokuda kwechikonzero ichi, pachiitiko ichi, tinoda kutarisa kune munyori, anoonekwa semumwe wevanonyanya kufunga vezana remakore rechiXNUMX. Asi ndiani aiva munyori uyu? Uye mabhuku api aakanyora? Tinokuudzai zvose.
1 Ndiani aive Aldous Huxley
2 Aldous Huxley: mabhuku aakanyora
2.5 Mabhuku ekufambisa
Ndiani aive Aldous Huxley
Kunobva: pamwe chete tsika
Usati waziva kuti ndeapi mabhuku aAldous Huxley, zviri nyore kuti iwe uzive zvishoma nezve nhoroondo yemunyori uyu, uyo kubva zvino zvichienda mberi tinokuudza kuti zvinokatyamadza.
Aldous Huxley, zita rizere Aldous Leonard Huxley, akaberekerwa muGodalming, Surrey, muna 1894. Mhuri yake yakanga isina “kuzvininipisa” mupfungwa yokuti havana kucherekedzwa. Uye ndezvekuti sekuru vake vaive Thomas Henry Huxley, nyanzvi yezvemhindumupindu ine mukurumbira. Baba vake, zvakare nyanzvi yezvipenyu, vaive Leonard Huxley. Kana vari amai vake, aive mumwe wevakadzi vekutanga kubvumidzwa kudzidza kuOxford, hanzvadzi yaHumphrey Ward (munyori wenhau akabudirira akazova mudziviriri wake), uye muzukuru waMatthew Arnold, mudetembi ane mukurumbira.
Aldous aive mwana wechitatu pavana. Uye iyo yese nhaka nehungwaru zvakaratidzwa mune mumwe nemumwe wevana (mukoma wake aive akakurumbira kwazvo biologist uye mukurumbira wesainzi).
Aldous Huxley akadzidza kuEton College. Zvisinei, pazera ramakore 16 akapotsa aita bofu kwegore nehafu nemhaka yokurwiswa kwepunctate keratitis, chirwere chemaziso. Pasinei neizvi, panguva iyi akadzidza kuverenga uye kuridza piyano achishandisa Braille system. Pashure penguva iyoyo, akaonazve, asi akanga akaremara zvikuru sezvo akanga ane ganhuriro dzakawanda nameso ose ari maviri.
Izvi zvinokuita kuti uzviite kusiya chiroto chake chekuva chiremba uye anopedzisira apedza kudzidza mumabhuku eChirungu kubva kuBalliol College, Oxford.
Pazera remakore 22, uye pasinei nezvinetso zvake zvokuona, akabudisa bhuku rake rokutanga, The Burning Wheel, uko kune muunganidzwa wenhetembo dzaakapedza mumakore mana aine mavhoriyamu matatu: Jona, The Defeat of Youth, uye Leda.
Kana riri basa rake, akanga ari purofesa paEton, asi akaguma arega nokuti akanga asingarifariri zvakanyanya. Nguva pfupi yapfuura, akashanda pamagazini yeAthenaeum pamwe chete neboka revapepeti. Haana kunyora nezita rake chairo, kana asiri nemanyepo, 'Autolycus'. Kwapera gore mushure mebasa iroro, akazova mutsoropodzi wetheater weWestminster Gazzette.
Muna 1920 akatanga kubudisa nyaya dzake dzokutanga. Yekutanga yaive Limbo, nepo, makore gare gare, aizoburitsa The Human Wrap, Sekuru Vangu Spencer, Mbiri kana Matatu Nyasha uye Fogonazos.
Asi bhuku rekutanga chairo raive manyemwe aCrome, iro raive iro rakabatanidza basa rake semunyori.
Mushure mebhuku iroro, zvimwe zvakawanda zvakaramba zvichisvika, izvo akabatanidza nezvimwe zvaaida, kufamba. Izvozvo zvinomubvumira kuti asangonyora mumhando dzakawanda uye zvirongwa, asiwo kuti ararame tsika dzakasiyana dzaimupfumisa uye dzaive chikamu chehupenyu hwake.
Makanga muri muna 1960 umo zvinetso zvake zvoutano zvakatanga chaizvoizvo. Mugore iroro akabatwa kenza yorurimi uye akatsungirira makore maviri achirapwa neradiotherapy. Pakupedzisira, pana November 22, 1963, Aldous Huxley akafa achigovera mirimo miviri yeLSD, kwete pasina kusiya mirayiridzo pamusoro pezvavanofanira kuita: kune rumwe rutivi, akarava Bhuku reTibetan Ravakafa munzeve yake; pane imwe, ichipiswa.
Aldous Huxley: mabhuku aakanyora
Aldous Huxley anga ari munyori ane hunyanzvi, uye ndizvozvo akatora zvinyorwa zvakawanda, zvinyorwa, nhetembo, nyaya ... Pano tinokusiira iwe runyorwa rwatakawana nemabasa ake ese (nekuda kweWikipedia).
Tinotanga ne nhetembo nekuti ndicho chinhu chekutanga chakaburitswa naAldous Huxley mumabhuku. Kunyange zvazvo vokutanga vari vekare, saka pakava neimwe nguva paakanyora zvakare.
Kukundwa kwevechidiki nedzimwe nhetembo
Pedzisa Nhetembo naAldous Huxley
Chinhu chakatevera chaakabudisa maererano nemhando dzaive nyaya. Vekutanga ndivo vaakaita achiri mudiki, asi gare gare akanyora mamwe mashoma zvakare.
Sekuru vangu Spencer
Vaviri kana vatatu ndatenda
Kunyemwerera kweMona Lisa
Nemanovhero, Aldous Huxley akabudirira zvakanyanya kubva kune wekutanga waakaburitsa. Asi zvakatonyanya neiyo yeNyika Itsva Yakashinga, iyo ndiyo yaanonyanya kuzivikanwa nayo. Asi paiva nezvimwe zvakawanda. Pano une runyorwa rwakakwana.
The Crome scandals
Art, rudo nezvimwe zvese
Nguva inofanira kumira
Tsoko uye essence
The genie uye mwarikadzi
Pamusoro pezvese zvataurwa pamusoro, akapiwa zvikuru kupa maonero ake pamusoro pehupenyu nematambudziko kuburikidza nezvinyorwa. Ehe, iwo akaomesesa uye iwe unofanirwa kutora nguva yako kuti uzvinzwisise, asi huzivi hwake panguva iyoyo hwaive hwakanakisa uye nhasi anozivikanwa semumwe wevanyori vakakosha vezana ramakore rechimakumi maviri.
Unozvigadzirisa sei? Dambudziko reRugare runovaka
Magumo uye nzira
Sayenzi, rusununguko uye rugare
Dambudziko rakapetwa kaviri
Themes uye kusiyana
Adonis uye Alphabet
Kushanya kutsva kunyika ine mufaro
Moksha. Zvinyorwa zve psychedelia uye zviitiko zvekuona 1931-1963
Mamiriro ezvinhu evanhu
Pakupedzisira, uye Achibatanidza kudzungaira kwake nekunyora, aivewo nenguva yekugadzira mamwe mabhuku ekufambisa. Muizvi haana kungotsanangura chete kuti guta iroro kana kuti nzvimbo dzaaishanyira dzakanga dzakaita sei, asi akafumurawo zvaainzwa munzvimbo imwe neimwe. Pane idzodzi haana kunyora zvakawanda, kunyange zvazvo mune dzakapfuura akadyisa minda norutivi rwenzendo dzake.
Panzira: zvinyorwa uye zvinyorwa kubva kune vashanyi
Mhiri kweGulf yeMexico
Jesting Pirato: Zororo Renjere
Wakamboverenga chero chinhu naAldous Huxley? Ibhuku ripi raunokurudzira kubva kwaari?
Yakazara nzira kuchinyorwa: Zvazvino Zvinyorwa » Literature » Mabhuku » Aldous Huxley: mabhuku
Ramón de la Cruz. The Enlightenment and the sainetes
Almudena Grandes aenda, nyika yezvinyorwa inochema kubva kwake kusingatarisirwi